> Resource > iPad > Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Biyaha Burburay iPad
Dhaco hoos aad iPad qubeyska? Waxaa ku hadhay roobka? Is dejisaan. Ha ku degdegin in ay sameeyaan dayactir haddii ay si caadi ah u shaqayn karo, xitaa ma bilaabi kartaa, haddii aad xoojiyaa aad iPad la Lugood hor. Haddii kale, waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa in dib ilaa xogta aad. Sida aynu dib kartaa xogta oo biyo ah oo ay waxyeello iPad on? Akhri oo waxaad heli doontaa jawaabta.
Sidee inuu ka soo kabsado xogta ka biyo burburay iPad
Arrinta No aad user Windows ama user Mac ah, waxaad isticmaali kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Windows) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) inuu ka soo kabsado xogta si toos ah uga biyo burburay iPad iyo sidoo kale soo kabsado xogta ay soo saarida gurmad Lugood fayl.
Download version maxkamada ee xorta ah ee barnaamijka hoose si aad u leeyihiin isku day ah.
Next aynu qaadan Wondershare Dr.Fone ee macruufka tusaale ahaan. Haddii aad tahay qof user Mac ah, halkan ka tagtaan, oo soo kabashada xogta iPad .
Tallaabada 1. Isku biyo aad u burburay iPad in computer
Burcad Wondershare Dr.Fone ee macruufka on your computer, ka dibna isku xiro biyaha aad u burburay iPad. Marka aad taas samayn, ha cararin Lugood waqti isku mid ah, ka fogaanaya aad gurmad Lugood lagu updated haddii ay jirto. Next, waxaad heli doontaa interface sida ka daba iPad ee la ogaado. Waxaa jira laba hababka soo kabashada bixiyo, soo kabsado Device macruufka, oo ka soo kabsado Lugood ee kaabta File.
Wixii iPad la isha bandhigay, mini iPad, iPad cusub iyo iPad 2:
Wixii iPad 1: Waxaad u baahan tahay inaad kala soo baxdo ka siib-in sida uu ogeysiiska ku saabsan suuqa kala.
Tallaabada 2. baaritaan biyo aad u burburay iPad
Si toos ah soo kabsado xogta ka biyo aad u burburay iPad, waxaad riixi kartaa Start Scan si ay u bilaabaan aad iPad bandhigay isha, iPad mini, iPad cusub iyo iPad 2.
Waayo, iPad 1, aad u baahan tahay si aad u hesho hab iskaanka ugu horeysay. Tallaabooyinka ay si fiican u sharxay suuqa kala kor ku xusan. Just raaco in aan galno.
Ku hay qalab aad, oo guji badhanka Start.
Qabo Power iyo badhamada Home waqti isku mid ah marka aad riix Start ee saxda ah 10 ilbiriqsi. Barnaamijku wuxuu tirin doonaa waqtiga aad u.
Fur button Power markii 10 seconds maray, laakiin sii haysta button Home for anther 15 ilbiriqsi.
Home Release marka aad hesho fariin ah ee guusha.
Ka dib markii in, barnaamijka bilaabo baar biyo aad u burburay iPad ee xogta, oo ay ku jiraan xogta lumay iyo xogta jirta.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha & badbaadin xogta iPad
Marka gool sawiridda, waxaad ku eegaan kartaa dhammaan xogta mid ka mid ka mid ah in natiijada scan, iyo soo kabsadaan oo dhan in aad halkaas ku eegaan karo. Haddii aad rabto in aad soo kabsado dhammaan xogta, kaliya calaamadee sanduuqa ku yaala xagga hore ee qalabka icon iyo Riix Ladnaansho in ay iyaga oo dhan la badbaadiyo on your xisaabinayo mid ka mid click.
Fiiro gaar ah: Macluumaadka halkan helay waxaa ka mid ah waxa aad leedahay aad iPad hadda iyo kuwii idinka tirtiray ka hor. Waxaad durki karaa badhanka on interface ee kor ku xusan in waxyaabaha bandhigay tirtiray kaliya.